Ezona ncwadi zibalaseleyo zikaPérez-Reverte, ukhetho olukhethiweyo | Uncwadi lwangoku
Iincwadi ezigqwesileyo nguPérez-Reverte
UCaptain Alatriste Ngaphandle kwamathandabuzo, yenye yeencwadi eziphambili zikaPérez-Reverte. Oku kuqinisekisiwe ngaphandle kokujongela phantsi uluhlu lwayo lweenoveli, ngaphezulu kweekopi ezingama-40 kwaye ziguqulelwe kwiilwimi ezininzi. Impembelelo yale misebenzi kuluntu olufundayo kunye nabagxeki kukhokelele umbhali ukuba abe kuloluhlu "lwabathengisi abathengisayo". Ukongeza koku, imisebenzi yakhe emininzi ilungiselelwe ngempumelelo ifilimu kunye nomabonwakude.
UPérez-Reverte ngumbhali waseSpain kunye nentatheli owaziwa kakhulu ngomsebenzi wakhe omninzi ongenasiphako. Okwangoku, inikezelwe kuphela kuncwadi, ngakumbi kwinoveli yezembali. Umsebenzi wakhe umvumele ukuba aphumelele inani elininzi lamabhaso kazwelonke nakwamanye amazwe kunye nokuvunywa, okuthetha ukuba akanakubonwa.
1 I-Biography kaPérez-Reverte
1.1 UPérez-Reverte, intatheli
1.2 UPérez-Reverte kunye noncwadi
2 IiSagas zikaPérez-Reverte
2.1 UCaptain Alatriste Saga
2.2 I-Falcó trilogy
3 Iincwadi zikaPérez-Reverte
3.1 UCaptain Alatriste (1996)
3.2 Ukumkanikazi waseZantsi (2002)
3.3 I-Falcó (2016)
3.4 Umqolomba wecyclops (2020)
4 Ezinye iincwadi zikaPérez-Reverte
UArturo Pérez-Reverte Gutiérrez wazalwa nge-25 kaNovemba ngo-1951, eCagagagena, isixeko esizimeleyo soMmandla waseMurcia, eSpain. Wafunda izifundo zobungcali kwiYunivesithi yaseComplutense yaseMadrid. Pha, Uphuhlise imisebenzi emibini ngaxeshanye ngexesha leminyaka emithathu yokuqala: ubuntatheli kunye nesayensi yezopolitiko. Nangona kunjalo, ekugqibeleni wayame kowokuqala, ngaloo ndlela waba sisidanga sobuntatheli.
Usebenze umsebenzi wakhe wokuba yintatheli iminyaka engama-21 ilandelelana, ukusukela ngo-1973 ukuya kowe-1994 ePueblo kwaye kule minyaka ili-9 idlulileyo I-TVE njengengcali yomlo oxhobileyo. Kumsebenzi wakhe wobuntatheli, wagubungela ukungqubana okukhulu kwihlabathi liphela, apho sinokuthi sikhankanye:
Kwakhona, ukusukela ngonyaka wama-91 wenza amanqaku odumo XLweekly (Isihlomelo seqela leVocento). Ngokufanayo, ngo-1990 uPérez-Reverte wayenobukho kunomathotholo, kwinkqubo Umthetho wesitalato de Igama loqhagamshelwano RNE (Irediyo yeSizwe yaseSpain). Ukugqiba ikhondo lakhe lomsebenzi kwi I-TVE, ibingumbhexeshi wenkqubo Ikhowudi yokuqala, Umxholo wakhe wawungumxholo omnyama.
UPérez-Reverte kunye noncwadi
UPérez-Reverte wangena kuncwadi ngo-1986, xa wayepapasha I-hussar, incwadi yakhe yokuqala, ibekwe ngenkulungwane ye-XNUMX. Kwiminyaka emibini kamva wazisa lo msebenzi Inkosi yokubiyela, yaveliswa eMadrid. Ngaphandle kobunzima bale misebenzi, umbhali waqala ukwamkelwa emva kokumiliselwa kwe Itheyibhile yeFlanders (1990) kunye Iklabhu yeDumas (1993).
Emva kokuthatha umhlala-phantsi kubuntatheli (ngo-1994), uPérez-Reverte wazinikela ngokupheleleyo kuncwadi, olwamkhuthaza ukuba enze iinoveli ezintle. Oku kubandakanya iseti yeencwadi ezenza izinto ze- UCaptain Alatriste, kwaye yavela ngo-1996. Kunokuthiwa yile saga yanika umbhali impumelelo kumazwe aphesheya, kangangokuba ipapashwe kumazwe angaphezu kwama-40.
Ukusukela ngo-2003, uPérez-Reverte ebelilungu lamalungu eRoyal Spanish Academy, ahlala esihlalweni seT. kwi2016 waseka indawo yencwadi IsiZenda, Ikwangumhleli ophambili kuyo. Kwakuloo nyaka mnye wakhupha enye yeendlela zakhe ezinkulu, i-Lorenzo Falcó trilogy. Kulo nyaka uphelileyo umbhali wazisa iincwadi zakhe ezimbini: Umgca womlilo y Umqolomba wee cyclops.
Umbhali UPérez-Reverte uneenoveli ezibalulekileyo nezaziwayo kwingxelo yakhe, kwaye kubo abalinganiswa ababini abahle babalasele: UAlatriste noFalcó. Zombini iinkwenkwezi kwiincwadi ezimbini ezaziphumelele ngokuqaqambileyo kuhlelo lwazo lokuqala kangangokuba zilungele ukuqhubeka kwamabali azo. Ukusuka apho la ma-sagas alandelayo azalwa:
UCaptain Alatriste Saga
Ukuqokelelwa kwencwadi kuka-Alatriste kwaqala ngo-1996 kwaye kwenziwe iinoveli ezisi-7. Oku kuqala nge Kwikomkhulu le-Alatriste, ilungiselelwe nguPérez-Reverte kunye nentombi yakhe uCarlota Pérez-Reverte. Eminye imisebenzi yaqhubeka ngumbhali yedwa. Zisekwe kwibali lika-Diego Alatriste kunye no-Tenorio, ijoni elidla umhlala-phantsi kwi-Flanders kwisithathu.
Iincwadi zizele zizenzo, zibalisa ngeziganeko zomphathi njengomphathi wamakrele eMadrid ngekhulu le-XNUMX. Esi sihlanganisi sithetha ngaphambili nasemva kwePererez-Reverte, ebonakalisiweyo kwi ukuthengiswa kwesigidi kwihlabathi liphela. Ukongeza, kukho izinto ezininzi ezihambelana nomsebenzi, kuzo zombini iifilimu, umabonwakude, iihlaya, kunye nomdlalo wokudlala indima. Ngo-2016, umbhali wenza ingqokelela yayo yonke imisebenzi, awayibiza ngokuba: Zonke ii-Alatriste. Iincwadi ezenza ingqokelela zezi:
UCaptain Alatriste (1996)
Ukucocwa kwegazi (1997)
Ilanga laseBreda (1998)
Igolide kakumkani (2000)
I-Knight kwi-Yellow Doublet (2003)
Ukukhulisa iiCorsairs (2006)
Ibhulorho yababulali (2011)
Ngo-2016, uPererez-Reverte uqala uthotho lweenoveli ezintathu ezinenkanyezi noLorenzo Falcó. Yimisebenzi ezele yimfihlakalo, ubundlobongela, uthando kunye nokunyaniseka okunempikiswano kunye nomthengisi weengalo ngaphandle kokuthintela. Ukuphuhliswa kwamabali kwenzeka eYurophu, kwiminyaka ye-1936 kunye ne-1937, ngexesha leMfazwe yamakhaya. Izahlulo ziyambamba ngokukhawuleza umfundi kwaye zimkhokelele ekubeni azive kwiimvakalelo zento nganye ayenzileyo.
UFalcó uhamba nabasetyhini ababini kunye nendoda, abazalwana bakaMonteros noEva Rengel; Aba ngabahlobo bakhe, kwaye, kwangaxeshanye, ngamaxhoba akhe. Olu luhlu lunohambo olukhulu, luzele ngamayelenqe, apho ungabona khona ukungqubana okuqhubekayo kwabalinganiswa abaphambili ukuze bafumane into abayifunayo. Umlinganiswa ophambili ubonakalisiwe kuba ngaphandle kokuba enezinto ezininzi ezintle ezinokumnceda ukuba afezekise iinjongo zakhe, usebenzisa iindlela ezingaqhelekanga ukuziphumeza. Ifomula esetyenziswe nguPererez-Reverte imfumanele uphononongo olugqwesileyo kunye nezigidi zabafundi.
I-trilogy trilogy yenziwe:
Enye yezona zinto zibalulekileyo ezinokwenzeka kwihlabathi leeleta zaseSpain kukuba uPérez-Reverte uthathe isigqibo sokuzinikela ngokupheleleyo kuncwadi. Akunakuphikwa ukuba, usiba lwakhe luye lwayityebisa kakhulu igalari yemisebenzi yethala leencwadi laseCastilian. Ezinye zeenoveli ezibalaseleyo zombhali zezi:
Lo msebenzi weentsomi zembali ubalisa ngesiqalo seziganeko zomphathi wamandla wempi kunye nejoni lemfazwe elidla umhlala-phantsi: u-Diego Alatriste no-Tenorio. Ibali lisetelwe ngenkulungwane yeshumi elinesixhenxe iMadrid, kwindawo eyonakeleyo nokwehla kweSpain. Ibali libaliswa ngu-Iñigo Balboa, unyana walowo wayesakuba liqabane lomlo womphathi kwi-Flanders kwisithathu.
Iyelenqe liqala ngo-Diego Alatriste entolongweni, kuba wayengakwazi ukuhlawula amatyala akhe erhafu. Emva kokukhululwa entolongweni, iAventriste's adventures iyaqala. Kuzo, iimfazwe zentsimbi ezibengezelayo ebumnyameni bobusuku zezona ziphambili. UGualterio Malatesta -igama kunye nombulali-, uFernando de Quevedo -imbongi nomhlobo ka-Alatriste- no-Fray Emilio Bocanegra-umncini-zincwadi okhohlakeleyo-bangoonobumba abenza ubomi kula maphepha.
UCaptain Alatriste ...
ILa Reina del Sur (2002)
Le noveli igxile kubomi bukaTeresa Mendoza Chávez (aka La mejicana), ibhinqa eliselula laseSinaloa (Mexico). Emva kokusweleka kwesithandwa sakhe "u-El güero" -umqhubi wenqwelomoya ohambelana ngokusondeleyo nenqwelo yeJuárez- uTeresa unyanzelekile ukuba aye eSpain, apho aya kuba nesiqalo esitsha, kodwa njengomrhwebi weziyobisi.
Iyelenqe lenzeka phakathi kwezicwangciso eMexico, eSpain naseStrait of Gibraltar. Pha, UTeresa uya kuzama ukuzinyanzela kwishishini elibonakaliswa kukungcatsha, uthando, amabhongo nokunyoluka. Uninzi luthi lusekwe kwiziganeko zokwenyani, nangona uPérez-Reverte enyanzelisa ukuba libali eliyintsomi. Le noveli yahlengahlengiswa kumabonwakude ngo-2011 kwaye yasasazwa kwisiteshi seTelemundo. Kufuneka kuqatshelwe ukuba umbhali wayengakuthandi kukhubazeko.
Ukumkanikazi waseZantsi (Eyona ilungileyo ...
Incwadi yokuqala ye-Falcó trilogy, yohlobo lweentsomi-zembali, iqala ngokufika kweengcali ze-espionage kunye ne-arhente yezobuntlola: uLorenzo Falcó. Ibali libeka umfundi phakathi kweMfazwe yamakhaya yaseSpain, kwimeko ephawulwe ngorhwaphilizo nalapho imikhosi yemikhosi ihlawulwa ngcono.
UFalcó unoxanduva lokungena kunye nokuhlangula inguquko ebalulekileyo kwintolongo yaseAlicante. Yinjongo yokuzibulala enokutshintsha ikhosi kwimbali yaseSpain. Abazalwana bakaMontero kunye no-Eva Rengel bajongene nokukhapha umlinganiswa ophambili kwindawo egcwele ukuthandabuza, isenzo, ukungcatsha nenkanuko.
Falcó (Uthotho lwe Falcó)
Umqolomba wee cyclops (2020)
Yenye yeencwadi zokugqibela zikaPérez-Reverte, apho kudityaniswa khona imiyalezo engaphezulu kwama-45.000 ukusukela ngo-2010 kuTwitter- uthungelwano umbhali alubiza ngokuba "ngumqolomba wecyclope" (kwaye sele usazi igama). Umsebenzi uqulethe iminyaka eli-10 emifutshane, kodwa enexabiso, ubukhulu becala ivela kuncwadi. Imigca yakhe iphinda yenziwe kwindawo ekuthiwa yiLola bar, indawo ebonakalayo apho umbhali ahlangana nabalandeli bakhe kwaye anike incoko exabisekileyo.
Kwabo banomdla, Umqolomba wee cyclops iyafumaneka ngefomathi I-eBook.
Umqolomba weeCylops: ...
Ezinye iincwadi zikaPérez-Reverte
Inkosi yokubiyela (1988)
Itheyibhile yeFlanders (1990)
Iklabhu yeDumas (1993)
Isithunzi sokhozi (1993)
Indawo yaseComanche (1994)
Umcimbi wokubekwa (ICachito) (1995)
Umsebenzi omfutshane (1995)
Ulusu lwegubu (1995)
Ileta engqukuva (2000)
Ngenjongo yokona (2001)
ICape Trafalgar (2004)
Ungandibambi ndiphila (2005)
Umzobi weemfazwe (2006)
Usuku lomsindo (2007)
Amehlo aluhlaza (2009)
Xa sawongwa ngembeko (2009)
IHoplite encinci (2010)
Iinqanawa ziyalahleka elunxwemeni (2011)
Itango likanogada omdala (2012)
Isigulana sniper (Ngo-2013)
Izinja kunye noonyana beebhokhwe (2014)
Amadoda alungileyo (2015)
Imfazwe yamakhaya yaxelela ulutsha (2015)
Izinja eziqinileyo azidanisi (2018)
Imbali yaseSpain (2019)
Umgca zomlilo (2020)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iincwadi ezigqwesileyo nguPérez-Reverte
UCharles Dickens. Ezinye iincwadi ezingaziwayo ngumbhali wesiNgesi